विप्लवसहितका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्न ७७ जिल्लामा यस्तो छ सरकारको तयारी – जलजला अनलाइन
Posted on March 17, 2019 Author Comments Off on विप्लवसहितका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्न ७७ जिल्लामा यस्तो छ सरकारको तयारी
चैत ३, काठमाडौँ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिमाथि सरकारले उच्च निगरानी थालेको छ ।
नेपाल प्रहरीका ७७ वटै जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको तथा शान्ति सुरक्षासमेत सबल र सुदृढ पारिएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएकोसमेत उनले बताए ।
सरकारले त्यस्ता समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुने व्यक्ति, संस्था र समूहलाई समेत कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । विप्लव समूहका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिकभन्दा पनि हिंसात्मक र आपराधिक देखिएको सरकारी निष्कर्ष छ ।
केही दिनअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’ले आफूमाथि आक्रमणको सूचना प्राप्त भएको सार्वजनिक गरेका थिए । तर, प्रहरीले भने भीआइपी र भीभीआइपीको सुरक्षामा जोखिमविहीन (जिरो रिस्क)मा सुरक्षा प्रदान गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
हिजोसम्म घटना भए पनि संलग्न मात्रै कानूनी कारवाहीमा आउँथे भने योजनाकारले उन्मुक्ति पाउँथे । अब भने सङ्गठित अपराधअन्तर्गत पनि कारवाही अगाडि बढ्ने भएकाले योजनाकारसमेत कानूनी दायरामा ल्याउन सकिनेछ । अब एकातर्फ बम पड्काउने र अर्कोतर्फ राजनीतिक मुद्दा उठाउने काम नहुने भएकाले पनि कारवाहीका लागि दुविधा हुँदैन । कुनै ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भेला, प्रशिक्षण देखिए पनि सार्वजनिक सुरक्षाअन्तर्गत कारवाही हुने प्रहरीले जनाएको छ ।
कमाण्ड एण्ड स्टाफ कोर्षमा पहिलो पटक नेपाली महिलाको प्रवेश
बैशाख ३, काठमाडौँ । नेपाली सेनाको कमाण्ड एण्ड स्टाफ कोर्षमा पहिलो पटक महिलाको प्रवेश भएको छ । सेनानी सुलोचना पौडेल शिवपुरीस्थित आर्मी कमाण्ड एण्ड स्टाफ कलेजमा सञ्चालन हुने २५औँ शृङ्खलाको एक वर्ष अवधिको उक्त कोर्षका लागि छनोट हुनुभएको हो । नेपाली सेनामा महिला चार हजार ६२ रहेकामा महिला सैनिक अधिकृतको संख्या ३७१ रहेको सहायकरथी एवं […]
निर्मलाको बलात्कार र हत्या ‘योजनाबद्ध’
भदौ ११, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका एसपी कुवेर कडायत निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या योजनाबद्ध रूपमा भएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। ‘दिनदहाडै, घरनजिकै र मान्छेको चहलपहल भइरहने ठाउँमा बाटो हिँड्ने एकजना व्यक्तिले जम्काभेट हुँदा बालिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नै सक्तैन,’ उनी भन्छन्, ‘निर्मलाको बलात्कार र हत्या योजनाबद्ध रूपमा भएको हाम्रो ठम्याइ छ।’ यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा […]
Posted on September 24, 2017 Author जलजला अनलाइन
असोज ८, जुम्ला । नेमकिपा परित्याग गरी माओवादीमा प्रवेश गरेका पुराना नेता पूर्णप्रसाद धिताल प्रदेशसभा सदस्यका लागि चुनाव लड्ने पक्का भएको छ । आइतबार माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकै दिन धिताललाई माओवादीले जुम्ला जिल्लामा प्रदेशसभाका लागि टिकट दिने घोषणा गरेको हो । माओवादीले धिताललार्इ उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेपनि कुन क्षेत्र भन्ने खुलाएको छैन । ७५० जनासहित […]
सीता दाहालको स्वास्थ्य समस्या के हो ? नेपालमा उपचार सम्भव छैन ? पढ्नुस